Sheekadu Ma Dhaamanayso! Wariye Soo Bandhigay Badalka Real Madrid Haddaba U Diyaarsatay Santiago Solari Haddii Xaaladu Sii Xumaato. - Gool24.Net
Sheekadu Ma Dhaamanayso! Wariye Soo Bandhigay Badalka Real Madrid Haddaba U Diyaarsatay Santiago Solari Haddii Xaaladu Sii Xumaato.
Maamulka kooxda Real Madarid ayaa haddaba u muuqda kuwo aan ku qanacsanayn shaqada ay dhawaan sida rasmiga ah ugu magacaabeen Santiago Solari iyada oo guuldaradii Eibar wax badan ka badashay kalsoonidii lagu siiyay afartii kulan ee uu hore u soo guulaystay.
Maamulka Real Madrid ayaa markii hore u muuqday in ay ku deg degeen in ay Santiago Solari ka saxiixdeen heshiis dhacaya 2021 laakiin markii horeba waxaa la sii fahansanaa in sidii tababarayaashii hore aanu Solari dhamaysan doonin heshiiskii uu saxiixay.
Laakiin maamulka Real Madrid ayaa haddaba ka fikiraya badalka Solari haddii ay xaaladu fiicnaan waydo kadib markii ay arkeen xaaladii murugada badnayd ee kulankii Eibar inkasta oo kadib ay Real Madrid guul muhiim ah ka soo gaadhay AS Roma.
Wariyaha Barnaamijka ‘El Chiringuito’ ee Pipi Estrada ayaa shaaca ka qaaday in Rela Madrid ay haddaba doonayso in halyaygii kooxdeeda ee Fernando Hierro uu noqon doono badalka tooska ah ee Solari haddii ay xaalada kooxda Los Blancos ka soo rayn waydo sida ay ahayd kulankii Eibar.
Fernando Hierro ayaa shaqada xulka qaranka Spain si ku meel gaadh ah uga badalay Julen Lopetegui markii ay Madrid kooxdeeda u magacowday wuxuuna Hirro soo shaqeeyay intii lagu jiray koobkii aduunka ee Russia 2018 oo uu xulka Spain soo gaadhsiiyay wareega 16ka xul qaran.
Wariye Pipi Estrada ayaa sheegay in uu xog ka helay in Solari shaqada laga caydhin doono haddii aanu kooxda ka saarin xaalada ay ku jirto isla markaana uu Hierro noqon doono badalkiisa.
Laakiin Pipi Estrada ayaa ka gaabsaday in uu faah faahin dheeraad ah ka bixiyo xogta uu ka helay shaqada tababaranimo ee Real Madrid balse waxa uu muujiyay in Solari aanu cago adag ku taagnayn haddii ay natiijooyinka kooxdu sii xumaadaan.
Maamulka madax wayne Florentino Perez ayaa ku caan baxay in tababare kastaba ay shaqada ka soo caydhiyeen iyada oo aanu jirin hal tababare oo dhamaystay waqtigii uu kooxda u saxiixay iyada oo Zidane uu ahaa tababaraha kaliya ee shaqada iska casilay isaga oo aan waqtigiisii gaadhin halka inta kale la caydhiyay.